Maitiro Ekuvaka iyo Webhusaiti mushure mekutenga iyo Domain Zita? - Step By Step Guide
Chikamu chePost:Domain / Hosting / Webhusaiti
Vazhinji vanogona kuve nekutenda kuti iwe unofanirwa kuhaya webhusaiti anovandudza webhusaiti asi chokwadi ndechekuti mazuva ano tekinoroji yakafambira mberi zvakakwana, unogona kuzviita wega pasina ruzivo rwehunyanzvi.
Unoda anovaka webhusaiti kuti uvake webhusaiti zvinoenderana nezvaunoda. Matanho acho ari nyore kwazvo. Ndiri kutsanangura gadziriso yakakwana gadziriso yekugadzirisa dambudziko rako rekugadzira yakazara webhusaiti.
Mushure mekutenga zita rezita, unoda kutanga wagamuchira chikuva chekutambira. Nzvimbo yekutambira inochengetera zvemukati zvewebhu. Kechipiri, Kuvaka webhusaiti, unoda anovaka webhusaiti. Pakupedzisira, zvishoma zvepfungwa dzekugadzira.
Mari yekuvaka webhusaiti
Vakakurumbira Webhusaiti Vavaki
Kuvaka webhusaiti Ine Domain Name
Kugadzira domeini pamwe nekutambira
Asi zvisati zvaitika, ungangoda kuziva kuti zvakadii chaizvo kuti ugadzire yakanaka webhusaiti-inotaridzika webhusaiti. Mhinduro ndeyekuti zvinoenderana zvachose nerudzi rwewebsite yaunoda. Webhusaiti diki yebhizinesi inotanga nemutengo wakaderera pane $100 gore rega rega uye inoenda zviuru nezviuru zvemadhora pagore nezvinodiwa zvehunyanzvi zvakanyanya.
Isu pachedu tinokurudzira vatengi vedu kuti vatange webhusaiti ine diki diki yekudyara sezvo iwe uchikura nebhizinesi rako, unogona kuwedzera zvemberi maficha.
Pane vazhinji vavaki vewebhusaiti izvo zvinokubatsira iwe kutanga webhusaiti-inotaridzika webhusaiti. Pano pazasi ndakanyora pamusoro pako zvakanyanya.
Dreamhost Webhusaiti Inovaka
GoDaddy Webhusaiti Inovaka
Vazhinji veavo vavaki vewebhusaiti vane iyo nzvimbo yekuvaka webhusaiti nekungodhonza uye kudonhedza. Chinhu chekupedzisira iwe unofanirwa kuenzanisa chako chinodikanwa uye zvibodzwa nenzvimbo yavari kuendesa.
Iwe unogona kutora kubatsirwa kwavo kwemahara ekuyedza zvirongwa uye kana zvichikukodzera iwe saka unofanirwa kuenderera nekutora yavo yemwedzi kana yegore mutengo wemitengo..
Iwe unofanirwa kuchengeta kukura kwako pane pekutanga, nekufamba kwenguva– Uchazokwanisa here kuwedzera mamwe marongero, inobvumidza iwe kukwidziridza maficha aunoda, ine rutsigiro rwevatengi pamwe nezvinotakurika maficha. Zvinokutendera here kuti ufambe dhata kubva kune imwe chikuva kuenda kune imwe pasina chero kurasikirwa?
Kunze kwevose vataurwa pamusoro apa vavaki vewebhusaiti, isu pachedu tinogara tichisarudza yega-inomiririra chikuva. Iyo WordPress webhusaiti anovaka yakavhurika-sosi, mahara, uye inouya nezviuru zvematemplate akavakwa uye kuwedzeredzwa. Izvo chaizvo chaizvo.
Kupfuurisa 41 % yevashandisi veinternet vari kushandisa WordPress mapuratifomu. Isu tinogara tichigadzirira mawebhusaiti evatengi muWordPress. Iyo ine hukuru hwakachinjika uye inenge inoenderana nezvimwe zvechitatu-bato maturusi.
Kubva pane iyo SEO yekuona maonero, takaona mienzaniso yakawanda kwazvo ichitsanangura hapana anogona kukunda WordPress. SEO zvese ndezvekuwana chinzvimbo pazvinjini zvekutsvaga seGoogle Bing nezvimwe. WordPress iri nekuwedzera kuchinjika. SEO maficha anobatsira Google nevamwe kuti vanzwisise zvemukati. Yekutsvagisa injini yekutsvaga ndeyekugadzirisa zvirimo zvako nenzira yaunotarisa munzvimbo yekutanga. Zvimwe kunze kweizvi, technical SEO nyaya zvakare. Iwe unogona nyore kuwana zviuru zvemavhidhiyo pane internet kugadzirisa mubvunzo wako maererano neWordPress zvichienzaniswa.
Kuvaka webhusaiti kunogara kuchinakidza. Kana iwe ukatarisana nedambudziko chero paunenge uchigadzira webhusaiti iwe unogona kushanyira iyo yekutibata nesu peji kuti utaure kuburikidza neemail.
Zvishandiso zvinowanzo pinda muzvikanganiso nekusarudza isiri-inowirirana chikuva. Zvakanaka, nekuda kwerombo uri pano nesu. WordPress imhando yepuratifomu ine zviuru zvezvakafanotaurwa zvakasiyana-chinangwa zvakagadzirirwa matemplate. Dhizaini ine zvinowedzera zvinokutendera iwe kuti ugadzire yako yakasarudzika dhizaini webhusaiti.
Ehe, WordPress yemahara, unogona kuikanda kubva pawebhusaiti yepamutemo. Iye zvino mubvunzo unomuka panobva WordPress kubva kana iri yemahara? Mhinduro urikubhadhariswa nekutenga yako yako yekutambira nzvimbo uye dura.
Heano zvimwe zvakanakisa zvinopihwa zveNhasi unofanirwa kuzvitarisa.
Sezvineiwo, mazuva ano, Bluehost yekugamuchira sevhisi kupa akawanda maficha ane 60% bvisa dhisikaundi apo mamwe makambani anogona kukubhadharisa iwe kuwedzera kune chimwe nechimwe chinhu. Kwete izvi chete asiwo iwe unowana yemahara duraini iyo inoda kukubhadharisa iwe kutenderedza 14 ku 15 madhora pagore.
unogona kushanyira iyi link kuti ubatsirwe ikozvino kumhanya kupihwa.
Haisi kambani nyowani mumusika yanga ichishandira mutengi kubva ipapo 2005. Kunze kweizvi, kana ukatarisana nedambudziko ripi neripi mukumisa webhusaiti yako sununguka kutaura nesu. Isu tinogara tiri nekuda kwako uye tinofara kubatsira.
Paunoshanyira iyo Bluehost yepamutemo webhusaiti, inotevera unofanirwa kudzvanya “tanga ikozvino” kuenderera mberi nekuvaka webhusaiti.
Izvi zvinounza iwe kune rinotevera peji riine rakasiyana mitengo mutengo. Vanhu uye makambani vanosarudza chirongwa zvinoenderana neyakagadzwa uye mhando yezvinodiwa. Isu pachedu tinokurudzira kuti utange nehurongwa hwekutanga. Imhaka yekuti iwe uri padanho rekutanga, sezvo bhizinesi rako richikura kuenda padanho rinotevera, huwandu hwevashanyi vanoshanyira webhusaiti yako, iwe unobva wafambisa kukwidziridza chirongwa.
Kunyangwe pese pandinovaka webhusaiti yemutengi wangu ini ndinogara ndichivakurudzira kuti vatenge chirongwa chekutanga. Pandinosimudzira yavo webhusaiti, vanotanga kuwana vashanyi, kanenge kanoyambuka 25000 vashanyi pamwedzi. Ipapo ini ndinoshandura kuchirongwa chakakwidziridzwa.
Pane kudaro, Kana iwe ukaverenga iyo yakazara mutengo wekutanga nehurongwa hunodhura kwazvo, unonzwa kuwedzerwa mutengo. Uye pachezvangu, hatikurudzire.
Isu tine ruzivo rwakawanda kwazvo nemasevhisi akadaro emutsa. Isu tanga tichigadzirisa zvese izvi zvinhu kwekupedzisira 10 makore. Tiri kungokupa iwe iro rairo zano.
Mushure maizvozvo, ivo vachakukumbira iwe kuti utore yakakodzera domain zita. Pano iwe unofanirwa kunamatira ne .com. inofanira kunge iri maererano nezita rako rebhizimusi nechiperengo chakarurama. Sezvo iwe uchikura, vatengi vako kana vashandisi vanoziva nyore zita rako uye zita renzvimbo.
Nhanho inotevera ndeyekubvunza iwe zvimwe zvekutanga senge email, zita, zita rokupedzisa, nezvimwewo. Kuzadza zvese, nhanho inotevera iwe uchaona yakawedzera sarudzo sarudzo senge kuchengetedza webhusaiti, Dziviriro yedomain, webhusaiti backup. Iwe unogona kutenga izvi zvekuwedzera zvivakwa gare gare paunenge uchida.
Pandakatanga yangu mutengi webhusaiti, Handimbovatengi ipapo ipapo. Mushure memwedzi kana maviri kana zvemukati webhusaiti zvaringana, ipapo ini zvirokwazvo ndinotenga backup nzvimbo uye chengetedzo ficha.
Shure kwekubhadhara mubhadharo, mushure mekuita kutenga kweiyo domain pamwe nekutambira. Basa rinotevera kuisa WordPress pane webhusaiti yako usati waenderera mberi nekuivaka.
Paunosaina neakaundi yako, Ivo vanozopa imwechete-tinya yekumisikidza nzvimbo kune vasiri-tekinoroji vashandisi. Vashandisi vanoda kuisa yavo webhusaiti vega pasina rubatsiro rwemumwe munhu wechitatu.
Kana zvese zvichaitwa chete “typeyoursite.com/wp-admin/” muwebhu browser iwe unozotungamira kune iyo rekupinda peji.
Pinda zvinyorwa zvako zvekupinda iwe uchaona iyo WordPress interface.
WordPress magadzirirwo uye anobatwa nezvakafanotaurwa madingindira. Yekutanga haina kunakidza uye inokwezva. Iwe unogona kuzvishandura zviri nyore nekudzvanya pakuonekwa –>Themes.
Iwe uchaona yakafanana skrini senge pazasi.
Pakudzvanya uye nyowani uchaongorora 1000+ akanaka WordPress madingindira. Pano zano rimwe chete nderekuisa dingindira zvinoenderana nezviri kudiwa kana ini ndinoti chinangwa. WordPress theme dhairekitori ine akasiyana maindasitiri madingindira. Iwe unogona kusefa ivo zvinoenderana nekuzivikanwa kwavo.
Nezve iri gwara, Ndiri pano kuenda kuzoisa yakawanda-chinangwa WordPress theme Ocean WP. Iyo ine akagadzirira-akagadzirwa matemplate. Pachezvayo unogona kuzviisa nekudzvanya kamwe chete. Uye gadzirisa izvi maringe zvinoenderana nezvaunoda.
Zvekunyora zvemukati kuwebhusaiti yako, iwe unogona kushandisa iyo posvo pamwe neye peji chivakwa. Zvinyorwa zvinonyanya kunyora zvinyorwa zveblog nguva dzose nepo mapeji ari chaizvo anoshandiswa pamapeji senge kutibata nesu peji, zvakavanzika mutemo, disclaimer, kumba, nezvimwewo.
Kuvaka webhusaiti mushure mekutenga duraini haina kuremedza zvachose kusiyana nemazuva ekutanga. Mazuva ano, vazhinji vavaki vewebhusaiti vakavaka zvekare pamwe nekupihwa kuronga nekushandisa mawebhusaiti nekungodhonza nekudonhedza. Chinhu chakanyanya kukosha kushanduka, kuenderana nevamwe kana paine shanduko huru. Kunze kweizvi, ine ine akawanda anobatsira mavhidhiyo ekugadzirisa mibvunzo isu pachedu. Isu takatsanangura yakanakisa sarudzo iyo inochengetedza yekupedzisira kwenguva refu uye iine zvinenge zvese zvaunoda.
Marii yaungaite iwe kubva kuWordPress Blog
Previous PostPaunotenga Domain kubva kuGoDaddy? Unova Wako Here?
Inotevera PostMaitiro Ekugadzira Yako Blog Webhusaiti
Ndinoshandisa sei duraini rangu randakatenga kumwe kunhu